AbaHleli beVidiyo abaSimahla aba-6 ku-Ubuntu | Ubunlog
AbaHleli beVidiyo baSimahla beBuntu
Ubuntu buxhasa ngokulula ilizwe le-multimedia, ingadlali iaudiyo nevidiyo kuphela kodwa ikwanceda ukwenza le mixholo. Okwangoku sinako yenza iifayile yeaudiyo nevidiyo ngokulula kunye neziphumo zobungcali ezivela ku-Ubuntu. Kwaye eyona nto intle malunga nayo kukuba sinokuyenza simahla.
Kule meko siza kukuxelela malunga nayo abahleli bevidiyo yasimahla esinokuthi siyifumane kwaye siyifake ku-Ubuntu. Ukufakwa kwayo phantse kuhlala kugcinwa ngokusesikweni kwaye banikezela ngamathuba okwenza iividiyo ezinobungcali kunye nendlela yokuphila, njengoko kunjalo kwi-youtubers. Nangona kunjalo, kufuneka sitsho ukuba abekho bonke, kodwa bonke bangabo.
3 Studio ye-OBS
7 Nguwuphi umhleli wevidiyo endifanele ukuwukhetha?
IKdenlive ngumhleli wevidiyo ogqibeleleyo osebenzisa amathala eencwadi eQt. I-Kdenlive lukhetho olukhulu kubasebenzisi abasebenzisa iPlasma okanye usasazo kunye ne KDE, nangona singakwazi ukufaka inkqubo zombini ku-Ubuntu nakwezinye iinkqubo zokusebenza ezinje ngeWindows okanye iMacOS.
IKdenlive isimahla kwaye isoftware yasimahla esinokufikelela kuzo zokugcina ezisemthethweni zeBuntu kunye nangaphaya iwebhusayithi esemthethweni yeprojekthi.
Kufuneka wenze ntoni ukuba Ubuntu ayifundi i-hard drive yangaphandle okanye ipendrive
Lo mhleli wevidiyo unenkxaso yokujonga esweni, Uluhlu lwexesha elineendlela ezininzi, uluhlu lweekliphu, uyilo olwenziwe ngokwezifiso, iziphumo ezisisiseko kunye notshintsho olusisiseko. IKdenlive ivumela ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kunye nokungeniswa kweefomathi zevidiyo ezahlukeneyo, zasimahla nezingahlawulelwayo. IKdenlive ikwavumela iiplagi kunye neefilitha esinokuthi sizisebenzise ukwenza iimveliso ezingcono.
I-Kdenlive yeyona ndlela isimahla nesimahla ngaphandle kolungiselelo lwevidiyo ku-Ubuntu, kodwa kufuneka sitsho ukuba kunjalo Olona khetho lunzima olukhoyo kubasebenzisi be-novice, yile nto eyenza ukuba ibe nabaphikisi kwaye ayifanelekanga kubasebenzisi abaninzi.
I-Kdenlive inokufakwa nge-terminal ngokusebenzisa le khowudi ilandelayo:
I-PiTiVi sisimahla kwaye simahla umhleli wevidiyo ongekho kumgca esinokuyifaka ku-Ubuntu. UPitivi ngumhleli wevidiyo osebenzisa isakhelo seGstreamer. Oku kusivumela ukuba senze ngokulula iividiyo ezivela eGnome okanye kwiidesktops ezifanayo ezisebenzisa iilayibrari zeGTK. I-PiTiVi ngumhleli wevidiyo opheleleyo kodwa ikwangomnye wabahleli bevidiyo Sebenzisa izixhobo ezimbalwa xa usenza ividiyo, into ekufuneka siyithathele ingqalelo. Lo mhleli wevidiyo akakabi nayo ingxelo yokuqala ezinzileyo kodwa ineziphumo ezininzi kunye notshintsho lokwenza iividiyo zethu. IPiTiVi ayinakho ukungqinelana neefomathi ezininzi zevidiyo kodwa iyayenza ixhasa ezona fomati ziphambili njenge-ogg, h.264 kunye ne-avi phakathi kwabanye.
Faka iJava 8, 9 kunye ne-10 kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo
Singafaka iPiTiVi ku-Ubuntu ngokusebenzisa i-terminal, sisebenzise le khowudi ilandelayo:
I-OBS Studio yinkqubo yasimahla nevulekileyo esinokuyifaka ku-Ubuntu nakwezinye iinkqubo zokusebenza. I-OBS Studio iye yaziwa ngokuba sisixhobo esikhulu sokwenza Ubuntu iividiyo okanye ezinye izixhobo zekhompyuter kuba ine-screen enkulu. I-OBS Studio ngumhleli wevidiyo olula kakhulu osivumela ukuba sidibanise ngokulula imifanekiso, iividiyo kunye nesandi.
I-OBS Studio ivumela ukwenza iividiyo kwi-flv, mkv, mp4, mov, ts kunye nefomathi ye-m3u8. Iifomathi azivuli kakhulu kodwa ewe iyahambelana namaqonga okupapasha ividiyo kwi-Intanethi. Lo mhleli usivumela ukuba sihlele ividiyo, hayi ukusasaza nje, nangona kufuneka sitsho ukuba icandelo lokuhlela aligqibekanga njengeKdenlive okanye i-Openshot.
Kwakhona, ngokungafaniyo nabanye abahleli bevidiyo, I-OBS Studio iqhagamshela namaqonga okusasaza ividiyo ukwenza iividiyo ezibukhoma. Le yokugqibela iyenze ukuba ibe sisixhobo esaziwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi bakho, isixhobo esingasifaka nakweyiphi na inguqulelo Ubuntu. Kolu fakelo, kufuneka sifeze lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
I-Shotcut ngumhleli wevidiyo yasimahla nevulekileyo efana neKdenlive kunye ne-OpenShot. Lo mhleli wevidiyo ngu ejolise kubasebenzisi be-novice nangona ibonelela ngezisombululo zobungcali njengeKdenlive. Enye yezona zinto zibalulekileyo esinazo kulo mhleli wevidiyo sisixa sotshintsho kunye neziphumo eziqulethwe ngumhleli kunye neefomathi zeaudiyo kunye nevidiyo exhaswa yinkqubo.
Okwangoku sinako faka iShotcut ngepakethe ye-snap. Oku kunokwenziwa ngokusebenzisa oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
Kodwa elinye lamanqaku alungileyo Sifumana kwiShotcut lixabiso lezifundo ezikhoyo zokusebenzisa esi sixhobo. Esinye sezifundo ezilungileyo kwiSpanish kwiShotcut senziwe nguNjingalwazi uJuan Febles wasePodcastLinux, izifundo zevidiyo esinokuthi sibonisane nazo simahla nge Youtube.
I-OpenShot ngumhleli wevidiyo olula kodwa opheleleyo, ojolise kubasebenzisi be-novice. I-OpenShot sisihleli somhleli wevidiyo esinokuthi sisebenzise kwaye sifake kwi-macOS nakwiWindows. Ngokwam, ngumhleli wevidiyo ondikhumbuza ngesixhobo seWindows Movie maker, isixhobo esize neWindows nesincede ekwenzeni iividiyo ngendlela elula. I-OpenShot ivumela yongeza iziphumo kunye notshintsho; ine-multitrack ukhetho lweaudiyo Nje ukuba siwugqibe umsebenzi wethu, singathumela kwelinye ilizwe nangayiphi na indlela esiyifunayo, Sinokudibanisa namaqonga anjengeYouTube ukuze xa ividiyo yenziwe, iOpenShot ilayishe le vidiyo kwiakhawunti yethu yeYouTube, Vimeo, Dailymotion, njl.
Izinketho i-OpenShot ekufuneka ixhase iziqeshana kunye nezinye iividiyo zibanzi kakhulu, ukuhambelana phantse nazo zonke iifomathi zevidiyo okanye ubuncinci ezaziwa kakhulu. Singayifaka i-OpenShot ku-Ubuntu ngalo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela:
ICinelerra ngumhleli wevidiyo owazalwa ngo-1998 kwiGnu / Linux. Ibiyi iqonga lokuqala lama-64-bit elihambelanayo elingahambelaniyo nomhleli wevidiyo yeGnu / Linux. ICinelerra ibe nempumelelo enkulu kwiminyaka yayo yokuqala njengoko yayingumhleli wevidiyo opheleleyo kwaye simahla, phantse wahlukile kuhlobo lwayo. Nangona kunjalo, njengoko ixesha lihamba, ukukhula kuyekisiwe kwaye uninzi lwabasebenzisi bagqibe kwelokuba bayishiye le projekthi.
Okwangoku uphuhliso luyaqhubeka kwaye iinguqulelo ezintsha ngokuthe ngcembe ziyaphuma zize Ubuntu. ICinelerra inepaneli yokuhlela eyahluliweyo, njengeGimp, inika ukuhlelwa okungahambelaniyo nevidiyo. Njengabo bonke abanye abahleli bevidiyo, iCinelerra ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zevidiyo kunye notshintsho lokwenza iividiyo kunye nemiboniso. Singafaka i-cinelerra ngokusebenzisa uvimba; Nje ukuba sinayo kufuneka siphumeze ifayile ngomyalelo ./
Nguwuphi umhleli wevidiyo endifanele ukuwukhetha?
Ayingabo bonke abahleli bevidiyo abakhoyo kuBuntu kodwa ngabahleli bevidiyo abasebenza ku-Ubuntu kunye neyona nto ibalaseleyo yokwenza iividiyo zobungcali. Ukuba kuye kwafuneka ndikhethe umhleli wevidiyo, ngokuqinisekileyo ndingakhetha iKdenlive. Isisombululo esipheleleyo nesikhululekile. Kwaye ukuba bekungenakwenzeka (kuba ikhompyuter yam icotha, kuba ndineGnome okanye ngenxa yokuba andifuni kwanto evela kwi-KDE) ndingakhetha iShotcut. Isisombululo esilula kodwa esinamandla esineendlela ezininzi zokufundisa eziza kusinceda senze iividiyo ezinobungcali. Kwaye wena Ukhetha oluphi ukhetho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » AbaHleli beVidiyo baSimahla beBuntu
Ngaphandle kwamathandabuzo iCinelerra
Ngaphandle kwamathandabuzo ukhetho oluhle kakhulu 🙂
Masibone ukuba yeyiphi na esebenzayo kum, ndifuna ukwenza ividiyo ngotshintsho oluntsonkothileyo, bendisele ndisebenzise i-kdenlive kodwa iiprojekthi ezilula KAKHULU. Enkosi ngenqaku, imibuliso.
Kwaye uthini ngoDavinci? ?
Kulawo akhankanyiweyo kwinqaku ngaphandle kwamathandabuzo eyona ilungileyo yiCinelerra GG, ngakumbi namhlanje, ngoFebruwari 2020, kuba iqela eliyithathileyo ngoku, iGuy Guys, lenza izimanga ngayo, kunye nokukhululwa ngokutsha ngenyanga.
I-Shotcut yekhaya kunye nohlelo olulula lukhetho oluhle kakhulu, i-kdenlive iseyile ndiyifunayo kodwa andinakuhlala ndihlala ndinempazamo ezininzi kunempumelelo kunye nokuhambahamba kakubi komsebenzi ngenxa yokuvalwa rhoqo kunye nokuphazamiseka komhleli, umhla we-18.12 yazinza, kodwa ngo-19.04 yonke into yaya esihogweni kwakhona.
Ndicebisa iCinelerra ngokusebenza njengezinto ezilungileyo kunye neShotcut ukulungiselela ukuhlelwa lula.
Ndisafuna ukubiza igama le-avidemux, omnye umntu endimaziyo kudala
Molo, kwiqela labasebenzisi beAvidemux ngeSpanish, sicebisa ukuba umhleli wevidiyo yasimahla kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ndikushiya iwebhu https://avidemux.es/
Umhlobo No73 sitsho
Molweni nonke, ndingathanda ukwazi ukuba yintoni umhleli wevidiyo kwiLinux, efana kakhulu neFreemake Video Converter endiyisebenzisa kwiWindows, ndifake iCinelerra, iAvidemux, iPitivi ... Kodwa andikwazi ukwenza into efanayo Ndenza ne-Freemake Video Converter (guqula iividiyo ukusuka kwi .mkv, .avi, .wmv ... ifomathi ukuya kwi-.mp4, ukusika iividiyo, ukujoyina kunye nokuzijikeleza).
Leliphi elona lisondeleyo ngokoluvo lwakho?
Isilwanyana sasekhaya sitsho
Mholo. Ukuguqula phakathi kweefomathi zevidiyo uneBrandBrake: https://handbrake.fr/ Andinakukuxelela malunga nabo bakweli nqaku kuba andibazi. Ndize apha ngokuchanekileyo ndifuna ulwazi kubahleli bevidiyo. Amathamsanqa!
Enkosi ngempendulo, kodwa kungekuphela kuguquko phakathi kweefomathi, ndifuna ukukhawulezisa ukusika ividiyo, ukujoyina iividiyo ezininzi kwenye okanye ukuzitshintsha ... Isandla esenziwe ngesandla (endikubonileyo ubuncinci, asivumeli ukujoyina okanye ukusika iividiyo okanye iinxalenye zevidiyo
Ukusukela nini apha i-ob yinkqubo yokuhlela iividiyo ... undenze ndachitha ixesha lam ukuyifaka ... nceda ujonge oko bakubhalayo
Ngaphandle kwamathandabuzo, ndingakhetha iAvidemux, elula, elula ukuyisebenzisa kwaye eneziphumo ezintle zokuba ngumhleli wevidiyo yasimahla.
Nantsi eyokulungiselela ubuntu: https://avidemux.gratis/avidemux-linux/
UMiguel Montalvan sitsho
Ngoku kukho iLightworks kunye neDaVinci Resolve.
Phendula uMiguel Montalván
ICinelerra, ndithe ndakuyibona, yandiphosa umva, ayinantanga kwaphela kwaye nje ukuba uyivule, iyakugubungela ngezigidi zokhetho ... Inkqubo elungileyo yokuhlela ividiyo akufuneki ikongamele, kodwa endaweni yoko ikukhuthaze. .. I-FreeMake Video Converter ngumzekelo olungileyo, Ewe, ayenzi vidiyo, kodwa ukuguqula, ukujoyina iividiyo, ukuzisika… Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ndinqwenela ukuba bendinenguqulo yeLinux…
I-OpenShot, kulungile, iqhubekile nokuzama ukubuyisela imizuzu eli-15 ukuba iyisikile kwividiyo, kwaye yahlala apho ... Ukuba awukwazi nokusika imizuzu eli-15 yevidiyo, cima sihambe, xa ekugqibeleni ndikwazile yenze isebenze, loo mizuzu ili-15 iphindwayo (isisombululo esifanayo, iikhowudi ezifanayo kunye nokukhetha kunye nesandi esiguqulwe kwakhona kwi-mp3 endaweni ye-aac, kwaye indinika ubunzima befayile ngaphezulu kwevidiyo yonke ... engamkelekanga ... Kwaye ngokufanayo neBhuleki lesandla, Pitivi ... Yiyo kuphela iShotCut endivumeleyo ukuba ndiyenze ngobungakanani obuncinci bokugcina ...
UAl Gomez sitsho
Emva kwengozi no-Sony Vegas, ndaye ndagqiba kwelokuba ndifudukele kwisoftware yasimahla, kuba ndisebenzisa iqonga ezimbini, iWindows-Linux. Ndifunde izimvo ezininzi malunga nabahleli bevidiyo ku-Ubuntu kwaye eyona kuthethwa ngayo kakhulu, ubuncinci kwiYouTube, yiShotcut. Okwangoku, nangokufuneka kwemeko ethile, ndiyayisebenzisa. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ngokuqinisekileyo ndiza kuyikhetha iCinelerra. Mhlawumbi inzima ngakumbi kodwa, ngokuzinikela okuncinci (kwaye ngaphandle koxinzelelo), ndiza kuyiphumeza into endiyenzileyo kwiinkqubo zobunini. Ukubulisa.
Phendula kuAl Gómez
Ngaphandle kwamathandabuzo iKdenlive yeyona ilungileyo
UKaren Suarez sitsho
Ndifuna ukurekhoda iividiyo kunye nokuthumela iifoto ngomculo
Phendula uKaren Suárez
Ngoku isoftware yokuhlela edumileyo yiTunesKit AceMovi. Kubahleli bamavidiyo abangenamava, lo mhleli wevidiyo lukhetho olufanelekileyo. Emva kwayo yonke loo nto, imisebenzi ibanzi kwaye umsebenzi ulula kakhulu.
Uyifaka njani i-Nextcloud 14 kwi-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo?
Ungawongeza njani umfanekiso ongasemva kwi-Ubuntu terminal